नायिकाद्वारा यौन दुर्व्यवहारको आरोपः कानुनी कारबाहीमा किन नजाने ? – Himshikharnews.com
१८ असार २०७७, बिहीबार २२:४०
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्नु नौलो होइन । बेला–बेलामा चर्चित र नाम चलेका कलाकारबीच लाग्ने आरोप–प्रत्यारोपले नेपाली चलचित्र उद्योग अझै सुध्रिएको छैन भन्ने सन्देश दिने गरेको छ । युवापुस्ताले निकै रुचाइएकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले नायक भुवन केसीले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्र पुनः तरंगित भएको छ ।
नायिका शाहले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै नायक केसीले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी हुन् । नायक भुवन केसीले भने यो विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
तर, उनलेपनि सामाजिक सञ्जालमै ‘खान नपाएको भन्दै ‘सामाजिक सञ्जालमा रोइ–कराइ गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् ? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । imagekhabar